Xildhibaan Fiqi: Waxaan Kenyatta ka raaligelineynaa inaan ogolaansho la’aantiisa isticmaalnay siyaasaddiisa – Kalfadhi
Xildhibaan Fiqi: Waxaan Kenyatta ka raaligelineynaa inaan ogolaansho la’aantiisa isticmaalnay siyaasaddiisa
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi, oo soo xiganaya sheeko ay warbaahin maxalliya ka diyaarisay barnaamij ay sheegtay in lagu daabacay bogga warfaafinta ee Filla Soomaaliya, ayaa sheegay in ay la tahay wax lala yaabo inuu Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gacan tuugaaleeystay, sida uu hadalka u dhigay, barnaamij siyaasadeed uu lahaa Madaxweynaha dalka Kenya, Uhuru Kenyatta.
Barnaamijka uu ku eedeeynayo Madaxweynaha dalka, oo uu bartiisa Feysbuugga ku daabacay link uu kasoo qaatay Goobjoog, ayaa u qornaa in barta website-ka ee Filla Soomaaliya lagu daabacay afar qodob oo uu Madaxweynaha Kenya ku qotomiyey siyaasadda uu rabo inuu ku maamulo dalkiisa mudada xakunkiisa Kenya, taas oo ay warbixintu sheegeyso in, iyadii oo aan waxba laga bedelin, sideedii loogu daabacay barta Filla Soomaaliya, iyadoo qeybta sawirka Kenyatta lagu bedelay uun sawirka Farmaajo.
Sawirka Farmaajo lagu dhaliilayo in lagu lamaaniyey xogta Kenyatta
“Uhuru Kenyatta cudurdaar ayaan u gudbinaynaa, maadaama ogolaansho la’aantiisa aan qoraalkiisii isticmaalnay, waxaana rajaynaynaa in aysan arintani saamayn ku yeelan xiriirka labada dal” ayuu Xildhibaan Fiqi u yiri si loo qaadaan karo jeesjees, hasa ahaatee ahayd qoraal uu sidaas ugu dhigay bartiisa Feysbuugga. “Marka aadan barnaamij lahayn, hal-abuur ma yeelanaysid, taas oo keeneysa in aad ummado kale waxooda maciin ka dhigato” ayuu Fiqi hadalkiisa sii raaciyey.
Dowladda, gaar ahaan Filla Soomaiya, ma beenin dhaleeceyntaas ilaa iyo hadda, wuxuuse Xildhibaan Fiqi sheegayaa in falkaas uusan ahayn mid u ekaa Madaxtooyada dalka. “In madaxtooyadeenii ay falkaas oo kale ku kacdo waa ceeb ummaddeena oo dhan loo soo jiidayo, mana jirto baahi loo qabi karo in madaxweyne dal kale qorshahiisii u qornaa laga soo qaato” ayuu yiri Fiqi. Waxa uu soojeediyey in qorshayaasha Filla Soomaaliya oo dhan dib loogu laabto, si loo hubiyo in aan meel kale laga soo min-guurin, sida uu hadalka u dhigay.
Sawirka Kenyatta ee la sheegay in xogta ku barbar qoran uu isticmaalay Farmaajo
Kalfadhi, oo isku dayday iney sahmiso barta internet-ka ee Filla Soomaaliya marka ay sheekadaas heshay kadib, kuma arag xogtaas. Dadka qaar ayaana barahooda bulshada soo dhigaya in xigtaas laga baahiyey Filla Soomaaliya ay tahay been abuur, halka ay qaarkoodna ku weerarayaan madaxtooyada xogtaas.
Balse, sida Goobjoog, oo la hadashay Kalfadhi, ay sheegtay waxay Filla Soomaaliya hawada ka saartay barteeda, kadibna waxay hawada ku soo laabatay markii ay ka saartay xogtii ay ka qortay, oo sida ay sheegtay ay muuqaal ka sii duubeen barta (https://villasomalia.gov.so/en/), ka hor inta aysan daabicin sheekada ay ka qoreen barnaamijka lagu daabacay bartaas.
Dhigaalka Xildhibaan Fiqi ee dhaliisha Farmaajo
“Anaga oo iska baareynaa baraha dowladda ayaan xogtaan ku aragnay website-ka Filla Soomaaliya, waxaana aragnay in la baahiyo iney tahay dan qaran” ayuu Kalfadhi ku yiri Xasan Maxamuud, oo ah Agaasimaha Warbaahinta Goobjoog. “Waxaan ogeen in xatooyada qoraalka (plagiarism) ay dambi tahay” ayuu hadalkiisa raaciyey.